I-EU yamkela ipilisi entsha ye-Merck yeLagevrito njenge-COVID-19 iimeko zotyando
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba zaseYurophu » I-EU yamkela ipilisi entsha ye-Merck yeLagevrito njenge-COVID-19 iimeko zotyando
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • News Sustainability • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Ipilisi entsha kaMerck yamkelwe yi-EU njenge-COVID-19 iimeko zotyando.
Umlawuli we-EU uthe unyango kufuneka luqhutywe ngokukhawuleza emva kokuba i-COVID-19 ifunyaniswe kwaye kwisithuba seentsuku ezintlanu kuqale iimpawu. Iyeza kufuneka lithathwe kabini ngosuku kangangeentsuku ezintlanu.
NgoLwesihlanu, umlawuli wamachiza we-European Union ukhuphe 'ingcebiso' exhasa ukusetyenziswa ngokungxamisekileyo kwechiza elitsha lokulwa ne-coronavirus eliphuhliswe yinkampani yaseMelika yamayeza amaninzi. Merck ngokusebenzisana ne-Ridgeback Biotherapeutics, nangona ingekagunyaziswa ngabasemagunyeni base-US.
The I-Arhente yamaYeza yaseYurophu (EMA) uye wacebisa ukusetyenziswa okungxamisekileyo kwe MerckIpilisi yonyango lwabaguli abasesichengeni se-COVID-19 njengoko iimeko ezintsha ze-coronavirus zisanda kwilizwekazi laseYurophu.
Kwintetho, ema lathi ichiza elibizwa ngokuba yiLagevrio - ekwabizwa ngokuba yi-molnupiravir okanye i-MK 4482 - "linokusetyenziswa ukunyanga abantu abadala abane-COVID-19 abangayifuniyo ioksijini eyongezelelweyo kwaye abasemngciphekweni omkhulu wokuba ne-COVID-19."
The ema idwelise iziphumo ebezingalindelekanga zepilisi, kuquka urhudo olungephi okanye oluphakathi, isicaphucaphu, isiyezi kunye nentloko. Unyango alukhuthazwa kubasetyhini abakhulelweyo.
Umlawuli ubhengeze kwangoko ngolwesiHlanu ukuba sele eqalisile ukuphonononga iyeza likaPfizer uPaxlovid we-COVID-19 ngenjongo efanayo “yokuxhasa abasemagunyeni kuzwelonke” abanokugqiba malunga nokusetyenziswa kwayo kwangoko phambi kogunyaziso lwentengiso ngenxa yokunyuka kwamatyala kunye nokufa eYurophu.
Namhlanje, i-Austria ibhengeze ukuba iza kungena kukuvalwa okutsha kwilizwe liphela ukusukela ngoMvulo kwaye yenze isinyanzelo sokugonya, ngelixa abasemagunyeni kwezempilo baseJamani bathi ilizwe lijike laba “kuqhambuko olukhulu.”
Bobabini iPfizer kunye neMerck bacele ukuvunywa kwamayeza abo e-coronavirus kuLawulo lokuTya kunye neChiza lase-US, kodwa akukacaci ukuba banokunikwa nini.